"ချစ်ခြင်းမေတ္တာ" ကြောင့်မှန်သည်တစ်ဦးန | Apg29
215 online! | Sidvisningar idag: 24 186 | Igår: 167 251 |
တစ်စုံတစ်ယောက်ကနှင့် "ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်" ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လက်ျာဘက်သောနိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်သင်တစ်ဦးနှင့်လက်ထပ်သူနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျနိုင်ပါတယ်, ကျွန်တော်ကမျြးစာကိုမှားယွင်းသည်ကိုငါသိ၏။ အလားတူပဲ, ကမေတ္တာ၌တူညီသောလိင်ကျဆုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မှား၏။
နှင်းလျှောကြယ်ပွင့်အင်ယာ Paerson အခြားသောမိန်းမ (Filippa) နဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျဆင်းဘယ်လိုအကြောင်းရေဒီယိုရဲ့နွေရာသီအစီအစဉ်ကိုယနေ့ပြောပြသည်။ သို့သော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် "ဖြစ်ခြင်း။ ဒါကြောင့်လက်ျာဘက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်မဟုတ်။
ဒီနေရာမှာကျွန်မအများအပြားကမှားသွားပါကယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်သောကြောင့်မှန်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆနေကြသည်။ သင်သည်သင်၏ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးကကျွန်မဖြစ်ရပါမည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ခံစားခကျြကိုထိန်းချုပ်ဖို့သငျ့သ​​ူသင်ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထက်ပိုခံစားချက်များကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဥပစာဖြစ်ကြ၏။
ယနေ့လူကိုပိုပြီးအစဉ်အဆက်ထက်ယေရှုလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ထို့နောက်သူတို့အသက်တာ၌လက်ျာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရအတွက်အသက်ရှင်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ယရှေုတိုပါနဲ့။
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 117 426 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 123 bloggartiklar, 93 189 kommentarer och 61 238 bönämnen.